PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: December 2010
ပြည်တွင်းမှာ ချီးမြှင့်မယ့် ပထမဆုံး မြန်မာစာနယ်ဇင်...
ဒီကေဘီအေ တပ်ကို နအဖ တပ်ရင်းသုံးရင်းဖြင့် တိုက်ခိုက...
ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းမော်ထဲ KIO မှ တဖန် အခွန်ကောက်ခံ...
ရှမ်း အမျိုးသမီးငယ် တဦးကို ‘စဝ်သုစန္ဒီ’ဆု ချီးမြှင့...
သမ္မတဟောင်း ဘုရ်ှကတော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖုန်းဆ...
BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဒုတပ်ခွဲမှူးကို ပစ်သတ်ထွက်ပြေ...
မြန်မာနိုင်ငံက နာဂစ် မုန်တိုင်းနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ စာရေးဆရာမ အင်မာလာကင်ရဲ့ စာအုပ် မျက်နှာဖုံးပုံ။
ဒီစာအုပ်ဟာ အမေရိကန်စာရေးဆရာမ အင်မာလာကင်က ရေးသားတာဖြစ်ပြီး လူမှုရေးစီးပွားရေး အားလုံးပြိုကွဲ ပျက်စီးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် နောက်ထပ် အကြီးအကျယ် ထိခိုက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေကို အသေးစိတ် ရေးသားထားပါတယ်။
ဆရာမ အင်မာလာကင်ဟာ အရင်က “ေ၈ျာ့ခ်ျအော်ဝယ်ရဲ့ ခြေရာကို မြန်မာပြည်မှာ ရှာဖွေခြင်း” စာအုပ်နဲ့ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာ စစ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ သိသိသာသာ တိုးလာနေ
အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက် ပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ မီဇိုးရမ်နဲ့ အာသံ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ဗီရမ်းသယ်ရွာက နိုင်ငံတကာ စစ်ရေး သင်တန်းကျောင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်ကနေ ၂၄ ရက်အထိ ရက် ၂၀ ကြာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ တောတွင်း တိုက်ခိုက်ရေး စစ်သင်တန်း တခုကို မြန်မာစစ်တပ်က လွတ်လိုက်တဲ့ ဗိုလ်ကြီး တဦးအပါအ၀င် စစ်သား အယောက် ၂၀ ခန့် လာရောက်ပြီး သင်တန်း တက်သွားပါတယ်။
ဒီစစ်သင်တန်းကျောင်းက အိန္ဒိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒီလိုမျိုး မြန်မာစစ်တပ်ကို သင်တန်းပေးတာဟာ မြန်မာဘက်မှာ ခိုလှုံနေတဲ့ အိန္ဒိယ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်တွေကို တိုက်ခိုက်ပေးဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်သလို မြန်မာအစိုးရကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အပေါ် ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။
အခု မြန်မာစစ်သားတွေ တက်ရောက်သွားတဲ့ အိန္ဒိယ တိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းကျောင်းဟာ ဧက ၆၀၀ ကျော် ကျယ်တဲ့အတွက် အာရှမှာတော့ အကြီးဆုံး ပျောက်ကျား တိုက်ခိုက်ရေး သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။စစ်တပ်တွေ အာဖကန်ကို စစ်မထွက်ခင် ၁၂ ကြိမ်ထက်မနည်း သင်တန်း လာလုပ်ဘူးပါတယ်။ ဗြိတိ
ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာ အမေရိကန်၊ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ အစ္စရေး၊ လက်ဘနွန်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ သီရိလင်္ကာ စတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက စစ်တပ်တွေဟာလည်း ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာ စစ်သင်တန်း လာတက်ဖူး တယ်လို့လည်း သီရပါတယ်။
သတင်းရင်မြစ် _ ဘီဘီစီ
Posted by PNSjapan at 3:08 PM0comments
အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ မြန်မာဘက်က တိုးတက်မှု ပြရန်လို
30 ဒီဇင်ဘာ 2010
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ တိုးမြှင့်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်အောင် စစ်အစိုးရဘက်က လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာဖို့၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းနဲ့အတူ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက မနေ့တုန်းကပဲ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
Posted by PNSjapan at 1:15 PM0comments
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ညနေ ခြောက်နာရီ ကျော်ခန့် တွင် လုပ်ကြံခံရပြီး သေဆုံးသွား ခဲ့သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအင်ယူ)၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာလဖန်း အား တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် (DKBA) ၉၉၉မှ စစ်ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောချစ်သူ နှင့် ဗိုလ်ဆံပြုတ်ဟု နာမည်တွင်သော ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး စောစံပြုး တို့ နှစ်ဦး မှ ပူးပေါင်းစီစဉ် ၍ လုပ်ကြံခြင်း ဖြစ်ကြောင့် ယခု ဧရာဝတီ တိုင်း တွင် ပြန်လည် အခြေချ နေထိုင်သည့် ၉၉၉ တပ် မှာ အရာခံ ဗိုလ် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးစောလေ၀ါ က မြန်မာဝီကီသို့ ယနေ့ ပေး ပို့ ထား သည့် အီးမေး တွင် အကြောင်း စုံဖော်ပြထားသည်။
အပြည်အစုံကို မကြာခင် ဖော်ပြ နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ရရှိ ထားသည့် မှတ်တမ်းများ ကိုစီစစ်ဆဲ
သတင်းရင်းမြစ်_ မြန်မာ ၀ီကီလိခ်
Posted by PNSjapan at 1:11 PM0comments
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၃၀)ရက်။
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ဝေါ်လေ ဒေသတွင် ယမန်နေ့က တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) နှင့် နအဖ တပ် စကခ ၁၉ လက်အောက်ခံ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ ၂၉၉ တို့ တိုက်ပွဲငယ် ဖြစ်ပွားရာ နအဖ တပ်သား တဦးကို DKBA က ဖမ်းမိထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဖမ်းမိ တပ်သားကို မသတ်ပစ်ဘဲ စစ်သုံ့ပန်း အနေနှင့် ထိန်းသိမ်း ထားမည်ဖြစ်သည်ဟု DKBA တပ်မဟာ ၅ မှ ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်သက်က ပြောသည်။
နောက်ဆုံးရ သတင်းတိုများ _ ဧရာဝတီ
Posted by PNSjapan at 2:39 AM0comments
ရှေးဟောင်း မြန်မာ့ဗုဒ္မရုပ်ပွါးတော် မတ်ရပ်ဆင်းတုတော်ကြီးအားဂျပန်လူမျိုးဘုရားဒါယကာမှမြန်မာများထံ ပြန်လည်အပ်နှံလှူဒါန်းခဲ့သည့်ရုပ်ပွါးဆင်းတုတော်ကြီးအားဦးထိပ်ထား၍
Posted by Ma Nandar at 2:18 AM0comments
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက်ရန် တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
Posted by PNSjapan at 1:26 AM0comments
ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံရောက် TIME မဂ္ဂဇင်း ဓါတ်ပုံဆရာ၏ အတွေ့အကြုံ ရှင်းလင်းသည့် ဗီဒီယို
Time မျက်နှာဖုံးဓါတ်ပုံဆရာ Platon ၏ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းချက် (ဘာသာပြန်)
ကျနော် သတင်းသမားအဖြစ် အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာပါပြီ ကျနော်က သမားရိုးကျ ဓါတ်ပုံသမား တယောက် မဟုတ်ပါဘူး ပုံရိပ်ဖန်တီးသူ တယောက်ပါ ကျနော် ပုံရိပ်တွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်အောင် လုပ်သူပါ။ ကျနော်တခါမှ ဒီလို ရူးခြင်စရာကောင်းတဲ့ ခရီးစဉ်မျိုး မကြုံဖူး သေးပါဘူး။ ဘာနှင့် တူလဲဆိုတော့ အိပ်မတ် လှလှလေးတွေနှင့် အိပ်မတ်ဆိုးတွေ ရောထွေး နေတာနှင့် တချိန်ထဲ မတ်နေတာနှင့် သွားတူတယ်။ ကျနော်တို့ ဟော်တယ်ကို ရောက်တာနှင့် ကျနော်အတွက်ဖုန်း ဆက်လာပါတယ်။ ဧည့်ကြို ကောင်တာက ပြောတာက “Mr. Platom ကို Ms. H ကဖုန်းဆက် လာပါတယ်” ကြားလိုက်တော့ Miss H ဟုတ်ပြီ Hanner ဖြစ်ရမယ် ကျနော် ဖုန်းကိုင်လိုက်ပြီး ကျနော်တို့ နှုက်ဆက်စကား ပြောပြီးနောက်
Posted by Ma Nandar at 12:23 AM0comments
Posted by Ma Nandar at 10:08 AM0comments
မြန်မာနယ်စပ်သို့် တရုတ် တိုက်ခိုက်ရေး တပ်ဖွဲ့၏ စစ်စခန်းများ အမြန် တည်ဆောက်နေ
ဒီဇင်ဘာလ 29 ရက် 2010 ခုနှစ်။
တရုတ်အစိုးရသည် မြန်မာပြည်နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ဆက်စပ်သည့် ၎င်း၏ ယူနန်ပြည်နယ်၊ မန်ဟိုင်းမြို့တွင် ယခင် နယ်ခြားစောင့် တပ်များသာ ထားရှိခဲ့ရာမှ ယခု တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ (People’s Liberation Army) ၏ စစ်စခန်းများ အမြန် တည်ဆောက်နေပါသည်။
ယခုချိန် ဆောက်လုပ်ခြင်း ပြီးစီးတော့မည့် ထို မန်ဟိုင်း တရုတ် တိုက်ခိုက်ရေး စစ်စခန်းသည် မြန်မာ ဘက်ခြမ်း ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မုံဂိုးမြို့နှင့် တစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။
စစ်စခန်းတွင် (၄) ထပ်တိုက်ဆောင်တစ်ခုနှင့် ၎င်း၏အနီးတဝိုက်တွင် တိုက်ငယ် အဆောင်များစွာကိုလည်း တည်ဆောက်နေကြောင်း ဒေသခံမျက်မြင်သက်သေများ ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောပါသည်။
Posted by PNSjapan at 1:18 PM0comments
28 ဒီဇင်ဘာ 2010
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ပြီး နှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီး (UNHCR) ရုံးက မနေ့က ပြစ်တင် ရှုတ်ချ လိုက်ပါတယ်။
ဂျီနီဗာ အခြေစိုက် UNHCR ရုံးက ဒုက္ခသည် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ ကလေးငယ် ၁၆၆ ယောက်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ တပ်ခ်ခရိုင် ဒုက္ခသည်စခန်း တခုကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ဦးနှောက် အမှေးယောင် ရောဂါ ကူးစက်မှာ စိုးရိမ်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 11:21 AM0comments
ပူတာ အို ထောင်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အေးလွန်းလို့ သေတော့မယ် ဗျို့ 
Freedom News Group က နောက် ဆုံး လက်ခံရ ရှိတဲ့ အီးမေးကတော့ ပူတာ အို အကျဉ်းထောင်မှာ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်း ကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ဦး ရဲ့မိခင် ဖြစ်သူ တစ်ဦး ပို့ လိုက်တာ ပါ။ ရာသီဥတု ဆိုးရွား မှု ကြောင့် လေကြောင်း ခရီးစဉ်နဲ့ သွား လို့ မရသလို ၊ ကုန်းကြောင်းကနေ လည်း အခြေအနေ မတည် ငြိမ်မှုတွေကြောင့် စစ်တပ်က ပေးမသွားဘူးလို့ ပါရှိပါတယ်။
စာထဲမှာ တစ်ပါတည်းပဲ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ လူငယ် ကွန်ယက် အနေနဲ့ လည်း ပူတာအို နဲ့အခြားထောင် တွေ မှာ အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ မိသားစုက ထောင် ၀င်စာလိုက် မတွေ့ နိုင်သူတွေ ကို အကူအညီပေး ကြဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိခင်တွေ ရဲ့ ကိုယ်စား တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်တဲ့။
ပူတာအို မြို့ က ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်နေပေမယ့် ပူတာအိုထောင် မှာ ဆေးဝါး နဲ့တခြား ရာသီဥတု ဒဏ် ခံနိုင်ဖို့ထောင်အာဏာပိုင်က စီစဉ်ပေးထားမှု တွေ မရှိ ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အတုဟု ယူဆရသော ၅၀၀၀ ကျပ် တန် ငွေ စက္ကူများ(ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်း၌ မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးထံတွင် ကျပ်ငွေ သိန်း ၃၀ ခန့်ရှိ အတုဟု ယူဆ ရသော ၅၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူများကို စခန်း အာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီး လိုက်သည်။
အတုဟု ယူဆရသော ၅၀၀၀ ကျပ် တန် ငွေ စက္ကူများနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် စောဖားဝါး(ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
NLD အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ယနေ့ လူငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူငယ်များ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နယ်ပယ် အသီးသီးမှ လူငယ် ၃၀၀ ကျော်တို့ ယနေ့ တွေ့ဆုံကြရာ လူငယ် ၅၂ ဦးက ၎င်းတို့ ကြုံတွေ့နေရသော ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေး အခက်အခဲများကို တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
“အကြောင်းအရာက တော်တော်စုံတယ်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေက တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မပြည့်စုံတဲ့ အကြောင်း၊ ပညာရေးစနစ် ချို့ယွင်း နေတဲ့အကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း လူငယ်တွေနဲ့ တရားရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေက သူတို့ အခက်အခဲတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ် ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို တော်တော် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေးခွန်း ထုတ်ကြတယ်” ဟု တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သော လူငယ်တဦးက ဆိုသည်။
၂၂၆ နှစ်မြောက် ရခိုင်ဘုရင်နိုင်ငံတော် ကျဆုံးနေ့ အခမ်းအနား ဂျပန်တွင် ကျင်းပ
ဒီဇင်ဘာလ 27 ရက် 2010 ခုနှစ်
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော (၂၂၆) နှစ်မြောက် ရခိုင်ဘုရင် နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာ ကျဆုံးသည့်နေ့ ၀မ်းနည်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား တရပ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဒီဇင်္ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဂျပန်)မှ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဂျပန်) တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ကိုကျော်သန်းလိူင်က “ ဒီဇင်္ဘာလ ၂၆ ရက် နေ့လည် ၁ နာရီမှာ တိုိကျိုမြို့ SHINJUKU , SANPE HALL 7F မှာ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ပြည်ပ-ဂျပန်)က ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ၂၂၆ နှစ်မြောက် ရခိုင်ဘုရင် နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာ အာဏာ ကျဆုံးတဲ့နေ့ အထိမ်းအမှတ်က ဒီဇင်္ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ သောကြာနေ့မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အများက မအားလပ်တာကြောင့် အားလပ်ရက် ဖြစ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အခမ်းအနားကို ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဂျပန်) ဥက္ကဌ ဦးလှအေးမောင် အပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူများ၊ ရခိုင်အမျိုးသားများ စုစုပေါင်း ၅၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားအား ရခိုင်ဘုရင်နိုင်ငံတော် အလံ၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အလံနှင့် ကျဆုံးသွားခဲ့သော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များကို ရခိုင် အမျိုးသား သီချင်းဖြင့် အလေးပြုပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းနောက်ပိုင်း သဘာပတိ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ-ဂျပန်) ဥက္ကဌ ဦးလှအေးမောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဦးပေါ်ထွန်းအောင်မှ ဘီစီ ၃၃၂၅ မှ အေဒီ ၁ရ၈၄ ခုနှစ်ထိ ရခိုင်လူမျိုး ကိုယ်ထီး ကိုယ်နန်းဖြင့် ထွန်းကားခဲ့ပုံကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုနောက် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ-ဂျပန်)တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး (၁) ကိုကျော်သန်းလှိုင်မှ ရခိုင်ဘုရင့် နိုင်ငံတော် ကျဆုံးရသည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် ရခိုင်နိုင်ငံတော် ကျဆုံးပြီး ဗမာပဒေ သရာဇ် နယ်ချဲ့တို့က ရခိုင်လူမျိုးများကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ပုံများကို ပြောကြားကာ၊ ယခု စစ်အစိုးရ၏ ရခိုင်ပြည်အတွင်း လုပ်ဆောင်နေ သည့် လုပ်ရပ်များသည် ယခင် ဗမာပဒေ သရာဇ်နယ်ချဲ့တို့က ရခိုင်လူမျိုးကို ပျောက်ကွယ် သွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံနှင့် အတူတူ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ အဓိကတော့မိမိတို့ သမိုင်းကို မိမိတို့ သိရှိရေးနဲ့ သမိုင်းကိုသိလာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ အတွက် အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးဟာ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာရန်နဲ့ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေ ညီညွတ်ရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး အခမ်းအနားကို ကျင်းပရတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကိကျော်သန်းလိူင်က ပြောသည်။
ထိုနောက်တက်ရောက်လာကြသော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ-ဂျပန်) အဖွဲ့ဝင် များက မိမိတို့၏ ခံစားချက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သဘာပတိ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(ပြည်ပ-ဂျပန်) ဒုဥက္ကဌ(၂) ဦးခင်မောင်ထွန်းမှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်း ခဲ့သည်။
လက်ရှိ နအဖ စစ်အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်သူလူထု အပေါ်တွင် ရှေးဗမာ ပဒေသရာဇ် ဘုရင်များထက် ဆိုးရွားသော ပေါ်လစီများ ချမှတ်ကာ အုပ်ချုပ်နေသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးမှာ တိုင်းပျောက် ပြည်ပျောက် ဖြစ်သည်သာမက ယခုတခါ လူမျိုးပျောက်ရမည့် အနေအထားနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် ရခိုင် တစ်မျိုးသားလုံးမှာ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေသော ဗမာ စစ်အစိုးရ အပေါ် အကြီးအကျယ် နာကျဉ်း နေကြသည်ဟု သိရသည်။
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ _ Lian Khan Sum
Posted by Ma Nandar at 2:48 AM0comments
ဘက်မလိုက် ကြားနေမူဝါဒဖြင့် ၀ ပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်မည်
ယခုလ ၂၀ ရက်မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေသည့် ၀ ပြည်သွေးစည်း ညီညွှတ်ရေးပါတီ ခရိုင်အဆင့် ပါတီအတွင်းရေးမှူး၏ ညီလာခံ မိန့်ခွန်း အတိုင်း ဘက်မလိုက် ကြားနေ၀ါဒမူ အတိုင်းရပ်တည် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၀ ပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကိုသာ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၀ ခေါင်း ဆောင်ပိုင်းတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောပြသည်။
“၀ ပြည်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိစ္စ ဆွေးနွေးတယ်။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချတယ်။ ကိုယ့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဓိကထားလုပ်သွားမယ်။ အပြောထက် အလုပ်နဲ့သက်သေပြသွားမယ် ။ ရပ်တည်ချက် ၆ ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်သွားမယ်။ အရင်က တင်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ ၉ ချက် ၈ ချက်တွေနဲ့ လုံးဝ ကွဲပြားသွားပါပြီ ” ဟု အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ ၀ ခေါင်းဆောင်တဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောပြသည်။
ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း၂၂ နှစ်မြောက် ဘာသာပေါင်းစုံ ၀တ်ပြုဆုတောင်း
မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည် ၏ ဂူဗိမာန်တွင် ဂါရ၀ပြု နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(ဓာတ်ပုံ - AP)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၂ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘာသာပေါင်းစုံ ၀တ်ပြု ဆု တောင်းပွဲ အခမ်းအနားကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ ခန့်က ပြုလုပ်သည်။
နံနက်ပိုင်းတွင် ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာမှ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိတ ၀ံသ၊ ချမ်းမြေ့ဆရာတော် ရှင်ဇနကာဘိဝံသ အပါအ၀င် သံဃာတော် ၁၀ပါးအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် ဦးအုန်းကြိုင် က ပြောသည်။
ကျနော်တို့တွေ တို့တတွေ ဘာလုပ်နေလဲလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးရမည့် အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ စစ်အစိုးရကို တိုက်လာတာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ စတွက်ရင် ၂၂ ရှစ်ကြာခဲ့ပြီ မျိုးဆက်တခု တော်လှန်ရေး တပတ်လည်နေပြီ။ ခက်နေတာက ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုရဲ့ ရင့်ကျက်မှုက ၂၂ နှစ်သား အဆင့်တောင် မရောက်သေတဲ့ ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင် နေရတယ်။ ရန်သူကို တိုက်ပွဲနှင့် ရင်ဆိုင် မချေမှုန်းနိုင်လို့ ပြည်သူအား (People power) နှင့် တိုက်သွားမယ် ပြည်သူကို အားကိုးမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးခေါ် အယူဆတွေနှင့် လုပ်လာတာလည်း။ ၈၈ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ထောင်သံသရာ တပတ်လည်လို့ မီးစာကုန် ဆီခန်း လုံးပါးပါးရမယ့် အခြေနေကို ရောက်နေပြီ။ အချိန်ထိ (Black Mail) နှင့် အချင်းချင်း တိုက်တဲ့ အဆင့်ကနေ မတက်နိုင်သေးဘူး။ အသွင်မတူရင် ရန်သူ သဘောထား ကွဲလွဲရင် တဖွဲ့ထောင်လို့ ( Power dismiss ) ဖြစ်ပြီး။ စစ်တပ်က တဆင့်ဆင့်စီ တက်လာတာ နောက်ဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (Natural power leader)ကို အပြင်ထုက်ပြီး အားပြိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်နေပြီ။ ပြည်တွင်းက ၈၈မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ ချပေးလိုက်တာ တိုက်ပွဲ လမ်းကြောင်းကို ပြည်ပရောက် ၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေ သယ်နိုင်တာ တယောက်မှမတွေ့သေးပါဘူး။ ဦးဝင်းတင် ညာသံပေးတဲ့ ထွက်ပေါက် မရှာနှင့် ဖေါက်ထွက်ကြပါ ဆိုတာကို ညာသံပြန်ပေးပြီး လိုက်နိုင်တဲ့ လူမပေါ်သေးဘူး။ အကုန်လုံး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဆင့် ကနေမတက်နိုင်ကြသေးဘူး။ ကိုယ်လုပ်သမျှ ဓါတ်ပုံလေးပါအောင်ရိုတ် မီဒီယာကနေ အချင်းချင်းကြား ကြွားတဲ့ အင်တာဗျုးလေး လုပ်ပြီး။ ရောက်ရာနေရာ နိုင်ငံဒေသက အဖွဲ့အစည်းလေးတွေနှင့် အလွမ်းသင့်နေပြီး ပေးတာလေးယူ ကြွေးတာလေးစား ကိုယ်နေရာလေး မပျောက်အောင်လုပ်တဲ့ ဘ၀ရောက်နေတာကို ရှက်စရာ အလွန်ကောင်းနေပြီ။ စစ်တပ်ကို စိန်ခေါ်တဲ့ အဆင့်ကို ဘယ်သူမှ မရောက်သေးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိ်ုင်က အမေရိကန်ကို ညာသံ ပေးရတဲ့ အဆင့်ဖြစ်နေပြီ။ ပြည်ပရောက် အမတ် တွေလုပ်နေတဲ့ NCGUB ၀န်ကြီးများလဲ အခုမှ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ (Activates) အဆင့်တောင် မရောက်သေးဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တွေ နှင့် စားပွဲဝိုင်းပေါ် ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်နေရမယ့် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးစိန်ဝင်းက ဘောလုံးသမားကို ဆုပေးပြီး လူစုတဲ့အလုပ်ကို ထလုပ်နေတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရမယ့် အချိန်က ကျန်ခဲ့ပြီ။ ပေးလိုက်တဲ့ နှပ်ကြောင်းကို ကွဲအောင်ရိုတ် ရမယ်ဆိုတဲ့ ကျောက်ခွဲသမားတွေ သဘောတရားလောက် နားလည်ရင်တောင် အလုပ်ဖြစ်နေပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလွတ်ခင်က သူမအသံကြားမှ အခြေနေမှန် လုပ်ရမယ့် လမ်းကြောင်းကို သိပြီး အချက်ကျကျ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ NLD LA က ဒေါက်တာတွေ အမတ်တွေလဲ ကြက်ပျောက် ဌက်ပျောက်ကို အသံတွေ တိတ်ကုန်တော့တာပဲ။ ဘာနှင့်တူနေလဲဆိုတော့ ကျေးရွာက ထန်းရည်သမား သားဆိုးတွေ အမေအိုက ဈေးရောင်းပြီး ကြွေးတာစား အမေအိုပြန်လာမှ ထမင်းချက် ခူးခပ်ကြွေးမှ သားတို့က အမေ့ကို ချစ်တာ အမေမရှိ်ရင် မိုးမီးလောင်မယ် တို့အမေကို မထိနှင့်ဆိုတဲ့ ပေါတာလူမိုက် ငတုံးတွေနှင့် စရိုတ်ထပ်ထူကျနေတယ်။ နောက်တချက် တပ်မတော်ကို ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်ပါ ပြည်သူနှင့်ပူးပေါင်းပါ အော်နေတဲ့ ပြည်ပလှုပ်ရှားသူတွေ ဘက်ကရော တပ်မတော်က အသွင်ကူးပြောင်းလာမယ် ပူးပေါင်းလာမယ်။ ဒါမှမဟုတ် တပ်မတော်ကို စွန့်ခွာလာမယ် မိသားစုဘ၀ကို တာဝန်ယူပြီး ကူညီပေးနိုင်တဲ့ လူရှိရင် အဖွဲ့အစည်းရှိရင် လက်ထောင်ခိုင်းကြည့်ပါ မရှိ်ဘူး။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ အခုချိန်ထိ စစ်တပ်ကို မယုံဘူး စစ်တပ်က ပဲ့ထွက်လာလဲ မယုံဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်သူက တောထဲမှာ ကိုယ့်လည်ပင်း ၀ါးကြောနှင့် အလှီးခံဖို့ အားအားယားယား ထွက်လာမလဲ။ စစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်မဟုတ်တာ လုပ်ထားတာ များတော့ တိုင်းရင်းသား လက်နတ်ကိုင်တွေ သွားဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မတွေးရဲဘူး။ ကြားနေတာဝန်ယူ နိုင်တဲ့ သမာသမတ်ကျတဲ့ အဖွဲ့စည်းလူပုဂ္ဂိုလ် ရှိလက် လက်တို့လိုက်စမ်းပါ စစ်တပ်က ရေကာတာ ကျိုးသလိုကျ လာမယ့် အနေထားတွေရှိနေတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နတ်ကိုင်တွေနှင့် အပစ်အခက် ရပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ တပ်မတော်သားတွေက သူတို့ဘ၀ ဘယ်လေက် နိမ့်ကျနေတာ တပ်မတော် အကြီးကဲတွေက ဘယ်လို သူတို့အပေါ်သဘောထားတယ် ဆိုတာ ပိုသိလာတယ်။ ခေတ်ပေါ်မီဒီယာ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အရလည်း ပြည်ပက သတင်းတွေကို သိလာလို့ သစ္စာထားတဲ့ အဆင့်တွေ လျော့လာပြီ။ အခုလို နိုင်ငံရေးတွေ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်နှင့် ၊ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ထိုးစစ်ဆင်မယ် ဆိုတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အကြံအစည်များကို သိနေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေက သူတို့ အသေမခံလိုကျတော့ဘူး။ ဒီအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးက တပ်မတော် သားတွေ ပူးပေါင်းလာနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်နှင့် အကောင်ထည် တခုဖေါ်နိုင်ရင် အကျိုးအမြတ် အလွန်ရမယ်။ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး(National Reconciliation) ဖေါ်ဆောင်ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲ အားကိုးနေလို့ မရပါဘူး။ အားလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀ိုင်းရံပြီး အဖက်ဖက်က မိမိတာဝန်ကို ကျေအောင်လုပ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ တပ်တွေ ၀င်လာမယ် တပ်မတော်က ခေါင်းဆောင်တွေ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူး ယဉ်နေတွေကို မေ့လိုက်ပါ။ သူရဲကောင်းဖြစ်ခြင်တဲ့ ခေတ်သစ်ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဖြစ်ခြင်တဲ့ အိပ်မတ် တွေကြောင့် ၈၈ ထဲက အခုချိန်ထိဘာမှ ဖြစ်မလာတဲ့ အဖွဲ့တခုခုပြီး တခုထောင်နေတဲ့ ၈၈ ခေါင်းဆောင်တယောက် ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲ ပရုပ်ဆီလူမမာအိမ် သွားပေးတာကို ဗီဒီယိုပြီး နေရာတကာလိုက်ဖြန့်နေရတဲ့ ဘ၀ရောက်နေပြီ။ ပညာတက်ဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေကျတော့လဲ နောက်က ကျန်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ကို လှည့်မကြည့်ခြင်တော့ဘူး။ Tuxedo party တွေက ဘ၀ကို ၈၈နောက်ပိုင်း ထိုင်းနယ်စပ်ကိုပြေးလာတဲ့ ဘ၀နှင့် မလဲခြင်တော့ဘူး။ အိပ်မတ်ဆိုးတွေလို့ သဘောထားလိုက်ပြီ။ ဒါတွေက ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး အတွက် အားနည်းသွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပါ ဝေဖန်ရင်လဲ ဆဲခံရမှာပဲ မတက်နိုင်ဘူးပြောမှာပဲ။ မှန်တာပြောလို့ ဆုမရဘူး ၀ိုင်းကန်လို့ သေခြင်းဆိုးနှင့်သေတဲ့ ဘ၀ရောက်သွားမယ့် ဒီမိုကရေစီရေး အင်အားစုတွေ လက်သံကို သိလို့ အမည်လဲ ဖေါ်မရေးတော့ပါဘူး။ နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် အကျိ်ုးအမြတ် မျော်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ရဲရဲကြီး ရပ်လိုက်ပါ အခု ခဏတာလေး နောက်ဆုံး အနေနှင့် လူထုခေါင်းဆောင်နှင့် အတူအချက်ကျကျ ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်လိုက်ရင် အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ နီးစပ်သွားမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ အချိန်တွေကြာလို့ လူထူခေါင်းဆောင်သာ အထိမ်းအမှတ် ကြေးရုပ် ဘ၀ရောက်သွားမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏလေး ပြန်စဉ်းစားပြီး ကူညီလိုက်ကြပါ။
[8888peoplepower]Group mail ကနေ လက်ခံရရှိပါတယ်။ ထိထိမိမိ ထောက်ပြထားတဲ့အတွက် အားလုံးပြန်ဖတ်နိုင်အောင် ထပ်မှန်ကူးယူ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Copy From _ rfa.ogr/
Network For Democracy In Burma(Japan)၏ အပါတ်စဉ် အစည်းအဝေး
Network For Democracy In Burma(Japan)၏ အပါတ်စဉ် အစည်းအဝေးကို TAKADANOBABA RECYCLE CENTRE တွင် ယနေ့ ၂၀၁၀ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၆ရက် နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၁ခု လွတ်လပ်ရေးနေ့ပွဲ ပြုလုပ်ရေး၊ ၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ထောက်ခံပွဲ ကျင်းပရေး ၊၂၀၁၁ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့ ပွဲကျင်းပရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
နယ်စပ်တိုက်ပွဲ များကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသော စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ၂၀၀ ကျော်ကို ထိုင်းဒေသခံ ရွာသားများက ကူးစက်ရောဂါပိုးများ ပါရှိနိုင်သည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မြန်မာဘက်သို့ ပြန်ပို့ရန် တောင်းဆိုကြောင်း သိရသည်။
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များသည် ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ဝေါ်လေဒေသတွင် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) နှင့် နအဖတပ်များ အကြား ယခင်လ ဆန်းပိုင်းမှ စတင်ဖြစ်ပွားနေသည့် ရက်ရှည်တိုက်ပွဲများကြောင့် ထွက်ပြေးလာသူများ ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရ လျှို့ဝှက် တည်ဆောက်နေသော စက်ရုံများအနက် တခုရှိ စက်ပစ္စည်း ထိန်းချုပ်ခုံရှေ့တွင် တွေ့ရသော ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်း။ (ဓာတ်ပုံ - AP)
နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ (IAEA) မှ ထိပ်တန်း နျူကလီယား ပညာရှင်ဟောင်း နှစ်ဦးအကြား မြန်မာစစ် အစိုးရရဲ့ နျူကလီယား ရည်မှန်းချက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွန်ရှုပ်ထွေး နက်နဲတဲ့ နည်းပညာ ပိုင်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေ မကြာသေးခင်က ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း IAEA ဟာ အခုနောက်ဆုံး သံသယဖြစ်နေတဲ့ နျူကလီးယား စီမံကိန်းနေရာတွေကို စုံးစမ်းစစ်ဆေးဖို့ နည်းလမ်း ရှာဖွေနေပါတယ်။
ကိုးရီးယား ကျွန်းဆွယ် စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကြားထဲက အမေရိကန် နဲ့ တောင်ကိုရီးယား ပူးတွဲစစ်လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ရုပ်သံသတင်း။
ယခုပြုလုပ်သည့် စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွေမှာ အင်အား ၈၀၀ ပါဝင်ပြီး ရဟတ်ယာဉ်တွေ တင့်ကားတွေ နဲ့ တိုက်လေယာဉ်တွေ ပါဝင်ကြပြီး လက်နက် အစစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီး ကြီးမားတဲ့ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုကြီးဖြစ်သလို သမိုင်းမှာ အကြီးဆုံး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နတဲ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာ အင်အား ၈၀၀ ပါဝင်ပြီး ရဟတ်ယာဉ်တွေ တင့်ကားတွေ နဲ့ တိုက်လေယာဉ်တွေ ပါဝင်ကြပြီး လက်နက် အစစ်တွေကိုသုံးပြီး ကြီးမားတဲ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးဖြစ်ပြီး သမိုင်းမှာ အကြီးဆုံး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Copy from _ tbsnewsi
Posted by PNSjapan at 2:07 AM0comments
ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်မှာ အရေးကြီးကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်က ရန်ကုန် အန်အယ်ဒီရုံးချုပ်၌ လူငယ် ၁ဝဝ ကျော်ကို ယနေ့ ဟောပြောခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု (ပင်လုံ) စိတ်ဓာတ်အကြောင်းကို အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်များနှင့်အတူ အန်အယ်ဒီ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးက ဟောပြောရာ သုံးနာရီ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
“ဒီနေ့အခါမှာ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်က အရင်က အင်္ဂလိပ်ရဲ့အောက်မှ လွတ်လပ်ဖို့၊ ဒီနေ့က အာဏာရှင် စစ်ကျွန်ဘဝကနေ လွတ်လပ်ဖို့။ ညီညွတ်မှသာလျှင် ပြည်တွင်းစစ်တွေကို တားဆီးနိုင်မယ်။ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်မှာ ဟိုတုန်းက လွတ်လပ်ရေး ရအောင်ယူမယ်၊ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်။ ဒီနေ့အခါမှာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လုပ်မယ်ဆိုတာ ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒုတိယပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကို ရှင်းပြတာပေါ့။ ” ဟု ဦးဝင်းတင်က မဇ္ဈိမသို့ ပြာသည်။
ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ကရက် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့တွင် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူရေး အဆိုပြုခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် ၎င်းအဆိုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးတွင် ပင်လုံစိတ်ဓာတ် အရေးကြီးသဖြင့် လူငယ်များ သိရှိစေရန် ဟောပြောခဲ့ရာ၊ အန်အယ်ဒီ လူငယ်များသာမက နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားသူ ကျောင်းသားလူငယ်များပါ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဘဘတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ Speech (မိန့်ခွန်း) ကို သေချာ ဂရုစိုက် နားထောင်ချင်လို့ လာတာပါ။ ကျနော်ကလည်း နိုင်ငံရေးအပိုင်းမှာ စိတ်အားထက်တန်တယ်လေ။ အဓိကတော့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ် ဆိုတာပေါ့နော်။ ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာက ပြည်ထောင်စု ခွဲထွက်ဖုိ့ မဟုတ်ဘူး။ တကယ့် ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးတွေ ပြောတယ်” ဟု ဟောပြောပွဲတက်ရောက်သူ လူငယ်တဦးက ပြောသည်။
ဟောပြောပွဲ လာရောက်သူများက ရုံးချုပ်အနီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်စဉ် ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသည်များ ရှိခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လုံမြို့၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း စသည့် တိုင်းရင်းသားများ တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုထဲတွင် အတူတကွ နေထိုင်မည်ဟု ကတိကဝတ်ပြုသော စာချုပ်ကို ရေးထိုးခဲ့ရာက ပင်လုံစာချုပ်ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
သတင်းဓါတ်ပုံ - ဒီမိုဝေယံ
အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရန် တပ်မဟာ ၁ နယ်မြေ၌ စည်းဝေး
အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA မြောက်ပိုင်း (ဓါတ်ပုံ-S.H.A.N.)
ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရေး ငြင်းဆန်ထားသော အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တပ်မဟာ ၁ ဌာနချုပ်၌ မိခင် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နာမည်ဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ဗဟိုဦးဆောင် ကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး အစည်းအဝေး ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
“သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နာမည်နဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်သွားဖို့ စက်တင်ဘာကတည်းက ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ တပ်ဖွဲ့ စည်းပုံတချို့လဲ အဲဒီကတည်းကပြင်ဆင်ထားတယ်။ အခုအစည်းဝေးက ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး တာဝန် ခွဲဝေဖို့ဖြစ်တယ်။ ၁၀ ရက်ကျော်လောက်ကြာပါပြီ။ အခုထက်ထိ အစည်းအဝေး ထိုင်နေကြတုန်းဘဲ” ဟု မိုင်းရှုးရောက် ၀မ့်ဟိုင်းဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖှ ဦးဆောင်သော တပ်မဟာ ၁ အဖို့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အနေဖြင့် ဆက်လက် ရပ်တည်သွားရေးကိစ္စ အတွက် တရားဝင် စ၀်လွယ်မောဝ်းနှင့်စ၀်ကိုင်ဖှတို့ထံ စာဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူဖြင့်လည်းကောင်း သုံးသပ်ချက်/ အကြံပြုချက်များ တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း တပ်မဟာ ၁ အရာရှိတစ်ဦးက ဤကဲ့သို့ပြောပါသည်။
ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအတွက် UWSA အထူးတပ်မဟာတခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း
တပ်မဟာ ၆၁၈ တပ်မဟာမှူး ပေါက်ဆမ်ရိုင်း
စက်တင်ဘာ ၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ လက်နက်ချ ရမည်ဟု နအဖ စစ်အုပ်စု ရာဇဒဏ် ပေးပြီး နောက်ပိုင်း ဝ ပြည် သွေးစည်းညီညွှတ် ရေး တပ်မတော်တွင် အရေးကြီး ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာအတွက် အထူး တိုက်ခိုက်ရေး တပ်မဟာတခု တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း ထားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။
“ အရင်တုန်းက ကျနော်တို့ မြောက်ပိုင်း ဝ နယ်မှာ တပ်မဟာ ၃ ခု ရှိတယ်။ စစ်ရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပြီးနောက် ပိုင်းအရေးကြီးတဲ့ နယ်ခြားမျဉ်း တလျှောက် အထူး တိုက်ခိုက်ရေး အတွက် တပ်မဟာသစ် တခု ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း ထား ရတာဖြစ်တယ်” - ဟု ယခု ရက်ပိုင်း မိုင်းမော UWSP ပါတီ ညီလာခံ တက်ရောက်သူ ဝ တပ်မှူးတဦး ကပြောပါ သည်။
Copy from _ irrawaddynews
UWSA “၀”ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် အနှစ် ၂၀ ပြည့် စစ်ရေးပြအခမ်းအနား
စစ်အစိုးရ၇ဲ့ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ရေးကို လက်မခံတဲ့ ၀ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီ ဖြစ်တဲ့ UWSP ၀ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပါတီက ၅ ကြိမ်မြောက် ခရိုင်ပါတီကွန်ကရက်ကို ရှမ်းပြည် မိုင်းမောခရိုင်မှာ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ဒီကွန်ဂရက်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့က စခဲ့ပြီး ၂၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် ၂၅၀၀ တက်ရောက်နေကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့မှာပဲ ပါတီ ဥက္ကဌ လျှောက်ညီလှိုင်က နောက်တက်မယ့် အစိုးရသစ်နဲ့ ထပ်ဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်း သူတို့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ် အခြေခံတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲသာ လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်ကို ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသွားတယ်လို့ ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ် အယ်ဒီတာ ဦးခွန်ဆိုင်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ဒီလိုဆွေးနွေးဖို့ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကလည်း နအဖ စစ်အစိုးရကို တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နအဖ က UWSA ကို ပြည်သူ့စစ် ဒါမှမဟုတ် နယ်ခြားစောင့် တပ်အသွင်ကိုသာ ပြောင်းရမယ်လို့ ပြောနေတဲ့အတွက် UWSP နဲပ နအဖ တို့ကြား တင်းမာမှုတွေ ရှိလာခဲ့ရပါတယ်။ ဒီညီလာခံ အပြီးမှာတော့ UWSP အနေနဲ့ သူတို့နဲ့ မြန်မာစ စ်စိုးရတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေး သဘောထားကို ကြေညာချက်တရပ် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 10:31 AM0comments
22 December 2010 18:17 .
စစ်အစိုးရတပ်နှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံ (KNU )တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် အတွင်းရှိ မာနယ်ပလော ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း KNU တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
မာနယ်ပလောဒေသတွင် ယနေ့ နံနက် ၇ နာရီခန့်က ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(KNLA) တပ်ရင်း ၂၀၂ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် နအဖ ခြေမြန်တပ်ရင်း(ခမရ) ၆၁ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပြောက်ကျား တိုက်ပွဲငယ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း KNU ဘားအံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဖဒို စောအောင်မော်အေး က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်း တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာရ ကျဆုံးမှု ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
မာနယ်ပလော ဒေသတွင် KNLA တပ်မဟာ ၅ နှင့် တပ်မဟာ ၇ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း၍ လှုပ်ရှားနေ သကဲ့သို့ နအဖ ၏ ခြေ မြန် တပ်ရင်း(ခမရ) ၃၃၈ မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကြယ်ပြောင်ကုန်း အခြေစိုက် နအဖ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ဖွဲ့ အမှတ် (၉၁၃) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လှုပ်ရှားနေကြောင်း သိရသည်။
KNU ၏ ဌာနချုပ်ဖြစ်သည့် မာနယ်ပလောကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ခွဲထွက် DKBA နှင့် နအဖ ပူးပေါင်း တပ်များ၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် နအဖ လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်း ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီတောင်ဘက်ရှိ ဖလူးကျေးရွာ ဒေသတ၀ိုက်တွင် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော်(DKBA) နှင့် နအဖ၏ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခြေမြန်တပ် ရင်း (ခမရ) ၅၄၇ တပ်များ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တိုက်ပွဲတွင် နအဖ ဘက်မှ ၇ ဦး ကျဆုံး၍ ၁၃ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိပြီး DKBA က ၁ ဦးကျဆုံး၍ တပ်မှူး ၁ ဦး အပါအ၀င် ၅ ဦး ခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် မြ၀တီမြို့နယ် အပါအ၀င် ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့ နယ်များတွင် စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်မဟာ ၅ တို့ တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် နေ့စဉ်နီးပါး တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
သတင်းရင်းမြစ် _ ဧရာဝတီ
တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် နအဖမှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းအပေါ် ကန့် ကွက်ကြောင်း။
တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် နအဖမှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းအပေါ် ကန့် ကွက်ကြောင်း ဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများတပ်ပေါင်းစုမှ ကြေညာလိုက်သည်နှင့်အတူ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းရှိ မြို့ နယ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်တွင် အောက်ဖေါ်ပြပါ စာရွက်များအား ဖြန့် ဝေခဲ့ကြပါသည်။
Copy from _ niknayman
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်။
နအဖ စစ်အုပ်စု၏ တရားဥပဒေမဲ့ လုပ်ဆောင်နေမှုများကို ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသည့် ဆန္ဒပြပွဲနှင့် မတရား ဖမ်းဆီးခံနေရသော ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ နှင့်နိူင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသည့် အခမ်းအနားကို တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါအရပ်ရှိ စစ်အခွန်ရုံး(မြန်မာသံရုံး)ရှေ့ ၌ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများတိ်ု့မှ ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့နေလည် ၃း၀၀ နာရီ မှ ၄း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ကိုမင်းကိုနိူင် အပါအ၀င် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မတရား အဖမ်းဆီးခံကြရသည့် လစဉ် ၂၁ ရက်နေ့ ကျရောက်တိုင်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်စေရန် အတွက် ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများတိ်ု့မှ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ် လာခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပထမ အဆင့် အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား(၂၀၀၀)ကျော်အား ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ် ပေးရန်အတွက် တောင်းဆိုသည့် ဆန္ဒပြ လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 21 ရက် 2010 ခုနှစ်။
ကချင်သတင်းဌာန သတင်း - ကချင်သတင်းဌာန .မြန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှစ်ဖက်ကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပယ် သွားပြီးနောက် KIO မှ ဖါးကန့် ကျောက်စိမ်း မော်ထဲတွင် အခွန်ကောက်ခံမှု ၁၆ နှစ်ကြာ ရပ်တန့်ထားရာ ဒီဇင်ဘာလလဆန်းမှ ပြန်လည် ကောက်ခံနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း KIO အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေများဖြစ်သည့် ဖားကန့်မြို့နယ် ဂင်ဆီ ဆိုင်းရာ (Gin Si Seng Ra) ကျေးရွာစသည့် ကျောက်စိမ်းမော်များနှင့် အခြား စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ချို့မှာလည်း ကောက်ခံနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ အထက်က KIO အရာရှိမှ ပြောသည်။
ယခု အခွန်ကောက်ခံခြင်းကို ရွှေမော်၊ ကျောက်စိမ်း ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းတွေအား လုပ်ပိုင်ခွင့် သတ်မှတ် ပေးထား သည့်ပေါ် မူတည်ကာ ကောက်ခံသွားရန် ရှိကြောင်း ကိုလည်း KIO အရာရှိမှ ပြောသည်။
“အခု KIO က တရားဝင် မြို့အဝင်အထွက် သွားလာဖို့ ခက်ခဲလာပြီဆိုတော့ သူတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ သူတို့မြင်နေရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို အခွန်ကောက်ခံလာတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဖားကန့် ဒေသခံတစ်ဦး သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
၁၉၉၄ အရှေ့ပိုင်း၌ KIO သည် ဖားကန့်မြို့နယ် တစ်ခုလုံး၌ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အခွန် ကောက်ခံခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး နောက်ပိုင်း အခွန်ကောက်ခံမှုကို ရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ယခု တဖန် ငြိမ်းချမ်းရေးပျက်ပယ်ပြီးနောက် ပြန်လည် ကောက်ခံဖို့ရန် နိုဝင်ဘာလ ကုန်ပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီကြီးများ အား အခွန်ကောက်ခံ ငွေပေးဆောင်ရန် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လာခဲ့သည်။
ယခုလို အခွန်ကောက်ခံလာရခြင်းကို KIO အရာရှိတစ်ခုမှ “ငြိမ်းချမ်းရေးယူတဲ့အချိန်တုံးကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကတိတိုင်း သူတို့ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာ အခွန်တွေ မကောက်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားတာတွေ အများအပြားရှိတယ်။ ခုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကလည်းမဟုတ်တော့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကောက်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။” ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရမှ KIO အား သောင်းကျန်းသူဟု တရားဝင်ပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက် KIO စီးပွားရေးကို ပိတ်ဆို့လိုက်ကာ KIO ဆက်ဆံရေးရုံးတွေကိုလည်း ပိတ်ပင်လိုက်ရသည်။ KIO အား စီးပွားရေး ပိတ်ပင် နေသည့်ကြားမှ အခွန်စကောက်လာသည်မှာ အခွန်မထည့်သူများအတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အပြစ်ပေးခံ ရနိုင်သည်ဟု ဒေသခံများ ပြောသည်။
Posted by PNSjapan at 2:00 AM0comments
နအဖ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေကို မတရားပြုလုပ်ပုံ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ဖွင့်သံကို ဖော်ပြထားပါတယ်......
ဗီဒီယို ရုပ်သံ - ဒီဗီဘီ
အမြင့် ၁၆၄ စင်တီမီတာရှိ ၁၉ရာစုနှစ်၊မန္တလေးခေတ်ရှေးဟောင်း မြန်မာ့ဗုဒ္မရုပ်ပွါးတော် မတ်ရပ် ဆင်းတုတော်ကြီးအား ဂျပန်လူမျိုး ဘုရားဒါယကာမှ မြန်မာများထံ ပြန်လည်အပ်နှံ လှူဒါန်းခဲ့သည့်
ရုပ်ပွါးဆင်းတုတော်ကြီးအား ဦးထိပ်ထား၍ ဘုရားအနေကဇာတင်ခြင်း မင်္ဂလာကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်ဝေး/ရပ်နီး အသီးသီးမှ မြန်မာဒကာ/မများ၏ အိမ်တွင် ပူဇော် ကိုးကွယ်လျက်ရှိသော ဗုဒ္မရုပ်ပွါး ဆင်းတုတော်များအား နှစ်သစ်မင်္ဂလာအဖြစ် အတူတကွ ဘုရားအနေကဇာတင် မင်္ဂလာ ပြုလုပ်နိုင်ရန်
သာသနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ ချုပ်၊ ဂျပန်ဌာနခွဲ(IBMO.JP)သို့၃၁-၁၂-၂၀၁၀ နေ့ အရောက် ပင့်ဆောင်ပေးကြပါရန် နိုးဆော် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ထို့ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ၊ရန်ကုန်မြို့ ၊ နာရေး ကူညီမှုအသင်း ၊ မြောက်ဒဂုံရှိ သုခဆေးကုခန်း မျက်စိ ခွဲစိပ်ခန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် စက္ခုဒါန- မြန်မာများ အလင်းရနိုင်ရန် မျက်စိအလင်း အလှူကိုလည်း တပါတည်း လှူဒါန်းနိုင်ကြပါရန် မေတ္တာရပ် အသိပေးအပ်ပါသည်။
နေရာ။ ။ T 170-0002,Toshima-ku,Sugamo-1-24-8(401)Birakyo။(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ ရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ ချုပ်၊ဂျပန်ဌာနခွဲ-IBMO-JP)
ဂျပန်ဌာနခွဲ၊တိုကျို ၊ဂျပန် ။
ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ ဩစတြေးလျ သံအမတ် အပြောင်းအလဲ ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ သံအမတ် Michelle Chan က ရန်ကုန်မှာ ရက်ပိုင်းပဲ ရုံးထိုင်ရတော့မှာပါ။ ဒီဇင်ဘာ လကုန်အထိပါ။
သူ့အကြောင်း http://www.dfat.gov.au/homs/mn.html မှာ ကြည့်ပါ။
သူ့နေရာဝင်မယ့် Bronte Moules ရဲ့ ပုံ။
ရန်ကုန်သွားမယ့် ဒီ သံအမတ်အသစ်က ဘန်ကောက်မှာ တာဝန်ကျပါတယ်။
(Deputy Head of Mission to Thailand - ဒုသံအမတ်)
သြစီ နိုင်ငံခြားရေးဌာန ၀က်ဆိုက် http://www.dfat.gov.au/homs/dep_th.html မှာ ဖော်ပြထားချက် အရ သူ့ရဲ့ သံတမန် သက်တမ်းက အနှစ် ၂၀ ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
http://www.dfat.gov.au/homs/index.html#t မှာ သြစီ သံအရာရှိတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဩစတြေးလျဟာ အမျိုးသမီး သံတမန် အရေအတွက် တော်တော်လေး များပြားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အဲဒီစာမျက်နှာက ပြပါတယ်။ ၁၁၁ ဦးမှာ အမျိုးသမီး ၂၆ ဦး ပါဝင်တယ်။
မြန်မာပြည်ကတော့ အမျိုးသမီး သံအမတ် ဆိုတာ ဒေါ်ခင်ကြည် တယောက်ပဲ ရှိဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေကို တဆင့် နိမ့်ထားရမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တခုတည်း အတွက်ကြောင့်တော့ ဟုတ်ဟန် မတူပါဘူး။ ညွှန်ချုပ်၊ သံအမတ်၊ ၀န်ကြီး ဆိုတဲ့ တာဝန်တွေဟာ စစ်အရာရှိတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ရမယ် မဟုတ်လား။
ဘန်ကောက်မှာ အလှူလုပ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒုတိယ သံအမတ် Bronte Moules
ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ သြစတေးလျက သူ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အမျိုးသမီးတဦးကို ခန့်လိုက်ပါတယ်၊ အမျိုးသမီးတွေ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာ ပိုပိုပြီး ရောက်လာနေတဲ့ နိုင်ငံပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်သံ တွင် ကြော်ငြာ ထည့်ချင် သူများပြား
The Lady ဇာတ်ကား တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ် သရုပ်ဆောင် သည် မစ်ချယ်ယိုး ဓာတ်ပုံ - Guardian
သီရိထက် ၊ ၊အင်တာနက် ဗီဒီယို ဆိုတ် တစ်ခု ဖြစ်သည့် ယူတု တွင် တင်ထား သော ဗီဒီယို များ အနက်လေဒီဂါဂါ ၊ ရီဟာနာ ၊ ဂျပ်စတင် ဘီဘာတို့ ကဲ့သို့ ပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗီဒီယိုများ တွင်လည်း ကြောငြာ ထည့်ချင် သူများပြား ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင် အခြေစိုက်သည့် ယူတု ရုပ်သံ မှ ကြော်ငြာဌာန တာဝန်ခံ ဒေးဗစ် လီမွန် က Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
အမေရိကန် စီပွားရေး လုပ်ငန်းများ အနက် မော်တော်ကားကြော်ငြာ များ နှင့် ကွန်ပျူတာကြော်ငြာများ သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာပြီးနောက် ထုတ်လွင့် တင်ဆက်ထားသည့် ဗီဒီယို ဖိုင်များ တွင် ကြော်ငြာထည့် ချင် ကြသည် ဟု သိရသည်။
Ford မော်တော်ကားကုမ္ပဏီ သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဗီဒီယို ဖိုင် အချို့ တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ မှ စ၍ ကြော်ငြာထည့်ရန် စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး Dell ကွန်ပျူတာ က မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ တွေ့ဆုံ ပြောကြား သည့် ကဏ္ဍများ တွင် အင်တာဗျူး ထည့်ရန် စာချုပ်ချုပ်ခဲ့သည် ဟု သိရသည်။
ယူတု တွင် ကြော်ငြာ နိုင်ရန် အတွက် ကြီးမားသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များ က သာရွေးချယ်ကြီပြီး မက်ဒေါနယ် ဟမ်ဘာဂါသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် က နာမည်ကြီး ဂီတ ဗီဒီယို အားလုံး ဉ် သီတင်း တစ်ပတ် ကြော်ငြာထည့် ခဲ့ရာ ဒေါ်လာ ရှစ်သောင်း ကျော်ကုန်ကျ ခဲ့သည် ဟု သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဘ၀ အထ္ထုပတ္တကို ပြင်သစ် ဒါရိုက်တာ လခ် ဘွန်ဆွန် က မင်းသမီး မစ်ရှယ်(လ)ယိုး နှင့် ရိုက်ခဲ့သည့် အချက် နှင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသည်တွင် နိုင်ငံတကာဉ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အချက်များ ကြောင့် လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဗီဒီယို များအား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင် များ က စိတ်ဝင်စားကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွင် ဗီဒီယို များ တွင် ကြော်ငြာထည့် ပါက ရနိုင်မည့် စီးပွားရေး အကျိူးအမြတ် များ အား ယူတု ကောင်ဆလ်တ် ဌာန တွင် လာရောက်မေး သူ ကော်ပိုရေးရှင်းပေါင်း နှစ်ဆယ်ထက် မနည်းရှိပြီ ဟု သိရသည်။
Copy from _ freedomnewsgroup
Photo by _ Guardian